I-Teepee eneepompoms - Moi Mili
Iintente ze-Moi Mili zingumbono omuhle wokuhlobisa ikona yokudlala yabantwana bethu okanye isipho ngamathuba athile. Iitetepe zethu ezinefom yeklasi zithukwe kumqhaphu okanye kwilineni emdaka. Yonke into yenziwe ngombala wokucoca ikotoni. Iimodeli ezikolu luhlu zigqitywe ngeeleyinti ezahlukeneyo, iitephu okanye iipompom. Umnyango we-tipi kunye nefestile ifakwe ngaphakathi. Lo mhlobiso wenza intente yethu yahlukile.
Teepee ineefestile ngasekhohlo. Iinkuni zethu zepine zithambile, zigudile, lonke ulwakhiwo luxhonywe ngentambo enobunzima. Iintonga zokhuni zifihliwe kwimigudu ethungelweyo ezantsi. Iintente ezintle zinodonga lwe5 kunye nesiseko sepentagonal, ezenza ukuba zizinze kwaye zikhulu kuneentente ezinesiseko sesikwere.
Sivelisa ePoland, ikakhulu kwiimveliso ezivela kwimvelaphi yasePoland. Sithatha inkathalo kuzo zonke iinkcukacha kunye nomgangatho ophezulu wokusebenza kunye nemveliso. I tipi iza nencwadana yemigaqo kunye nesigqubuthelo. Siyakumema ukuba wenze iiseti ezimibalabala ezivela kwiimveliso zethu.
Intente ye Teepee yabantwana "Mint fog"
Intente ye Teepee "Imhlophe qhwa"